amin'ny Jerosa Stewart
Inona no tsapanao mba ho mahomby ny olona mpitovo? Isika manana toetra mahazatra ny mahafinaritra, tsy matahotra, ary vao mainka hatoky tena. Izahay tena tafalatsaka amin'ny ho avy no mihevitra: izay no handeha manana sakafo hariva amin'ny herinandro manaraka? Iza no afaka miantso ny zava-pisotro aho anio alina? Iza no afaka ny hiaraka amiko ho minitra farany nankany amin'ny nosy? Matetika isika mba hifandray amin'izao tontolo izao-at-lehibe: ho namana tsara indrindra amin'ny olona, antoko sy ny toerana fa tsy miantehitra amin'ny namana na fianakaviana ny fanohanana. Hanadino ny mankaleo, an-trano ihany no tokan-tena stereotype; isika dia hirotsaka tanteraka eo amin'ny fampivelarana ny fiaraha-monina ara-tsosialy manokana. Hahita antsika amin'ny fanaovana fanatanjahan-tena, ny flicks, ny trano fisakafoanana, ary manindry an-tserasera, varotra-tsitrapo na noho ny fahafaham-po ny fahafahana ny anankiray efa voavitrana. Ary eto dia tsy maintsy am-polony-haves tokan-tena rehetra dia tokony hanana mba ho azo antoka ny fitohizan'ny fahombiazana.
1. The Outfit. Fantatrao, ny akanjo miaraka izay mitondra ny loko eo imasonao, Mampitombo ny curves, ary mampidera ny fananana ny olona izay mahatonga ianao hanohitra koa tsara loatra!
2. Ny sorony ny Miantsoa On. Ny olon-drehetra mahazo manirery. Tsarovy ny vazivazy taloha izay mandeha, “Vehivavy telo lahy Mila hanatanteraka azy: Ny iray mba hikarakara azy. Ny iray mba ho tsara ho azy. Ary ilay iray hafa mba hiresaka momba ny roa hafa.”
3. Karaoke hira. Raha toa ka tsy afaka mihira, ataovy azo antoka fa mifidy ny hifanaraka izay tsy mitaky dity tanteraka.
4. A madio vazivazy.
5. A maloto vazivazy.
6. Tahiry N efa nomaniny ho solon'izay gotta ianao.
7. Scented labozia N fomba lehibe mba hamelombelona sy miala sasatra anao sy ny an-trano, ary Hey, mijery tsara kokoa noho ny olon-drehetra labozia.
8. Mahatsapa tsara video / DVD N zavatra miseho ao amin'ny orana andro, ny andro maty ny saka, ny andro very ny asa, na manana ady amin'ny namana tsara indrindra.
9. Talenta. Tokony ho nanampy zavatra ho an'ny antoko & nahoana raha izany namana sy ny vahiny manana anao ny? Mitondra divay tsara, mahafantatra ny fomba juggle, manampy fisainana resaka.
10. Toetra & tena fanazavana, nefa azo ambolena.
11. A lehibe tsiky maimaim-poana izany, ary manome vetivety manintona!
12. The Cocktail. Nahatonga resaka io ô, ary tsy ianao matoky fa mijery nandidy ny zava-pisotro mangatsiaka fa tsy clueless raha zava-pisotro fumbling amin'ny sakafo?
Anarana iombonana fihetseham-po
Antoko lehibe fitaka. Makà famakiana palmie na sora-tanana famakafakana kilasy. Mahafinaritra ny namana amin'ny talenta vaovao hita.
Hangalatra ity Drink: Mahatalanjona Mojito
Namako McKinley no quintessential bi-morontsiraka bartender. Izy no tanteraka ny molotov izay mahazo azy nanasa ho any amin'ny tsara indrindra ao amin'ny tokan-tena antoko tanan-dehibe meccas an'i Manhattan sy San Francisco. Nahoana ianareo no tsy hilalao an-trano bartender amin'ny ora faly amin'ny namana, na hanaiky izany fomba fahandro ho toy ny sonia zava-pisotro? Hamporisika lehibe sasany mojo, Baby!
Ny Ra McKinley Orange Mojito
2 Oz fahazavana Rum
1/2 voasary mena aty
Ranom- 1/2 voasary makirana
1 tablespoon siramamy na tsotra syrup
Mampiasà lava, tery fitaratra. Raiso ny ra fizarana voasary, 5 ravina solila, siramamy sy ny ranom-sokay; muddle ao amin'ny fitaratra. Add ranomandry mba hameno ny fitaratra. Fa ao ny Toaka; manaitra tsara. Ambony eny amin'ny nidaboka ny fikambanana ara-pahasalamana sy ny garnish soda amin'ny ravina solila kokoa.
Mahatsapa kely ao amin'ny lohalika malemy?
Misy olona izay manao na inona na inona, fa mbola hiafara nahazo vehivavy tsara kokoa noho izy ireo tena afaka hiatrehana ....